Galla chinensis arcuate dzakatangira China. huru chezvinonhuwira gallnut ndiyo gallnut tannin. tannin ari hydrolyzed kuti gallic acid. gallic asidhi ndiko kutanga nemashoko akawanda mishonga intermediates kana zvinodhaka.
The chakarondedzera inorwisa utachiona basa gallnut hwakasimba. ari Decoction kuti gallnut ane akasiyana inhibitory kubatsira utachiona zhinji. ayo inorwisa utachiona nezvinozoitika kuti mapuroteni precipitate uye coagulate nyore nokuda kusukuta matehwe. ganda Nde Kuparadzirwa chikamu inorwisa utachiona zvinoriumba.
The ortho-phenolic hydroxyl boka rine zvakanaka kushanda muna nokudya zvokupara superoxide vakasununguka radicals, uye mamiriro ichi Panewo zvikurukuru gallnut, saka ine chinokosha Anti-kuchembera kushanda. gallic asidhi uye propyl gallate anoshandiswa nevakawanda sezvo antioxidants mune zvokudya uye zvimwe namakemikari zvigadzirwa.
YOSE vangangoramba SHANDISA
Gallnut nezvinogadzirwa nomukaka zviri kuwedzera kushandiswa zvokudya ano, mishonga, uye zvizoro utano Mazinga.
Isu icharamba kusangana kukura
inoda kuti makasitoma edu pamwe yepamusoro
zvinhu zvakanaka basa!
Shanghai Kanwinn Pharmchem Ltd. nheyo muna 2002, kunyanya aidaro kuvandudza, kugadzira, uye basa mishonga intermediates zvakadai gallic asidhi nezvinogadzirwa nomukaka. tiri aitungamirira nokutengesa kushandisa kupa intermediates kuti dzakawanda namakemikari, mishonga, nemicheka makemikari, Whitehead Textile uye värjäys Mazinga. Shanghai kanwinn Pharmchem Ltd. akashandisa kuva chikuru nokutengesa 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde kuna Roche Group. zvigadzirwa dzinotengeswa zvakanaka Japan, kuUnited States uye Europe, pamwe negore rokutengesa emamiriyoni emadhora. isu icharamba kusangana kukura zvinodiwa vatengi yedu yepamusoro zvinhu uye basa rakanaka!
Contact isu mamwe mashoko kana bhuku waari
123-Trimethoxybenzene , 2.3.4-Trimethoxybenzaldehyde , Pyrogallic acid , Pharmaceutical Intermediates , 1 2 3-Trimethoxybenzene , Gallachinensisp.E ,